Hey’adda ICG oo ka digtay in xasarado ka dhashaan doorashiinka Soomaaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Hey’adda ICG oo ka digtay in xasarado ka dhashaan doorashiinka Soomaaliya
Hey’adda ICG oo ka digtay in xasarado ka dhashaan doorashiinka Soomaaliya
Hey’adda Xasaradaha Caalamiga ah, International Crisis Group (ICG), ayaa warbixin ay soo saartay uga digtay halista ka iman karta in dowladda federaalka ay dib u dhigto doorashooyinka dalka ayada oo aan la isku wada raacsaneyn.
“Go’aan hal dhinac ah wuxuu noqon doonaa khatar, marka la eego mucaaradnimada heerka sare ah iyo u diyaar ahaanshaha isku-dhac ee ay muujiyeen saamileyda qaar. Taa beddelkeeda in lala hadlo kuwa aan dooneyn in doorashada dib loo dhigo oo ay ku jiraan dowlad goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka waxay muhiim u noqon doontaa in la xakameeyo natiijada go’aan kasta oo mas’uuliyiinta ay ka qaadanayaan arrintan,” ayaa lagu yiri warbixinta ICG.
Hase yeeshee, sida ay sheegtay ICG, dadka xog-ogaalka ah ayaa sheegay in haankan uu yahay mid aan suurta-gal ahayn, marka la eego amni darrada dalka iyo u diyaar garowga doorasho ee aadka u liito, waxaana mucaaradka qaarkood ay rumeysan yihiin in tani madaxweyne Farmaajo uu ku adkeysanayo isaga oo og in uu yahay qorshe aan la fulin karin, sidaas darteedna ay tahay qiil loo sii diyaarinayo in doorashada dib loo dhigo.
ICG ayaa soo jeedisay, in haddii ay noqoto in doorashada dib loo dhigo, waxyaabaha lagu heshiin karo ay ka mid tahay dhismaha dowlad midnimo qaran ah, oo dowlad goboleedyada iyo mucaaradka ay xilal ku yeeshaan.